Alika Mena, alika an-tanànan'ny angano | Fitsangatsanganana tanteraka
Red Dog nanjary iray amin'ireo alika malaza indrindra eran-tany vokatry ny horonantsary "Red Dog, 2011, ny asan'ny alika mena", notarihin'i Kriv Stenders.
Na izany aza, ity biby ity dia efa fantatry ny olona sy tiany Aostralia ela be talohan'ny nitondrana ny tantarany teo amin'ny sehatra lehibe. Misaotra ny mpanoratra anglisy Louis de Bernieres, izay nitety ny faritra pibara, any Aostralia Andrefana. Tao no nahitany ny aingam-panahy ilaina hanoratany ilay tantara hoe "Alika Mena", navoaka tamin'ny 2001, izay iorenan'ilay sarimihetsika.
Bernières dia mpanoratra mpanoratra tantara mahomby maro toa ny "Mandolin an'i Captain Corelli" na "Birds without wing", ankoatry ny hafa. Nitsidika ny tanànan'i Dampier Rehefa sendra ilay sarivongana malaza izy dia tonga dia nahaliana azy. Eny, ny boky sy ny sarimihetsika (ny roa dia notifirina hatramin'izao) momba ny alika mena dia mifototra amin'ny tantara marina.
Sarivongana Red Dog ao an-tanànan'i Dampier, Western Australia
1 Ny tena tantaran'ny Alika Mena
2 Alika sarimihetsika
Ny tena tantaran'ny Alika Mena
Teraka tao amin'ny tanànan'ny mpitrandraka ao Paraburdoo tamin'ny taona 1971 i Red Dog ary vetivety dia lasa mpikambana malala tao amin'ny fiarahamonina Pilbara. Nahavita traikefa nahafinaritra maro izy io ary nanana tompona maro, na dia azo lazaina aza fa saika ny mponina rehetra ao amin'ny faritra no nandray azy io ho fananan'izy ireo.
Este kelpie australianina Mainty hoditra, fantatry ny fitiavany ny fijoroana manoloana ny fiara eny amin'ny arabe izy ireo mba hijanonanan'izy ireo ary avelany handeha. Toy izany no nihetsiketsika ilay alika, izay manan-tsaina mihoatra ny santionany hafa amin'ny karazany, avy amin'ny tanàna ka hatrany amin'ny tanàna. Hoy ny olona nampiasa ny tamba-jotra bus koa izy indraindray. Indray mandeha, mpamily iray saro-kenatra no sahy nandà ny hidirany, ka nahatonga fihetsiketsehana feno hatezerana avy amin'ireo mpandeha hafa. Tahaka izany ny alika mena, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Ilay mpirenireny pilbara (ny honenan'i Pilbara).
Tao anatin'ny fiainany fohy dia lasa i Dog Red toetra malaza be any Western Australia: natsangan'ny Vondron'ny mpiasan'ny fitaterana ary lasa mpikambana ofisialy ao amin'ny Dampier Salt Sports and Social Club. Izy aza dia nanana kaonty tamin'ny anarany!
Rehefa maty ny alika tamin'ny 1979, maro tamin'ireo mponina Pilbara no kivy. Izany no antony nandraisan'ny ben'ny tanànan'i Dampier fanapahan-kevitra atsangano ny tsangambato iray ho fahatsiarovana azy. Ity tsangambato ity dia mitondra soratra amin'ny teny anglisy izay ahafahanao mamaky hoe: «RED DOG, Ilay mpirenireny Pilbara. Maty izy tamin'ny 21 Novambra 1979. Sarivongana natsangan'ireo namana marobe nataony nandritra ny diany.
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana dia noho io sarivongana io no nahafantaran'i Louis de Bernières ny tantaran'ny alika mena, izay nanosika azy hanoratra sy hampahafantatra an'izao tontolo izao ny fisiany. Fanomezana mendrika.
Ny voalaza ao amin'ny sarimihetsika, natsangana tamin'ny 1971, dia ny traikefa nahafinaritra an'i alika mena mena volo mahafinaritra izay mandeha amin'ny arabe mitady ny tompony. Notantaraina ny tantara, amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ny kamio iray Thomas tonga tao Dampier fotsiny mba hijerena vondron'olona miomana hamono alika antitra marary. Fa ny alika kosa dia malala loatra amin'ny olon-drehetra mba hanomezana izany famaranana izany. Noho izany, tsy nahavita namono ny Red Dog, dia niverina tany amin'ny baran'ny tanàna izy ireo, ary nanomboka nahatadidy ny tantaran'ilay alika sy ny fomba nanovan'ny biby mendri-kaja sy mahatoky azy ireo ny fiainany ho tsara kokoa.
Ity no tranofiara ofisialy amin'ny teny anglisy:
Ny mpilalao sarimihetsika amerikana no sarimihetsika Josh lucas, ilay New Zealander Keisha Castle Hughes sy ny aostraliana Rachael taylor y Noa taylor. Ny anjara asan'ny Red Dog dia nilalao kelpie namana iray antsoina hoe koko (Azonao atao ny mahita azy etsy ambony, amin'ny sary izay lohany amin'ny lahatsoratra).
Ity sanganasa sinemaisialy ity dia manasongadina ny endrika sy toetra miavaka ao amin'ny faritra Pilbara, raha mitantara ny tantaran'ny Red Dog am-pitiavana sy vazivazy lehibe.
Ny fahombiazan'ny sarimihetsika dia toy izany taona maro taty aoriana, amin'ny 2016, a prequel an'io, mitondra ny lohateny hoe "Alika Mena: manga manga." Amin'ity horonantsary faharoa ity, navoaka tany Espana tamin'ny anarana hoe "Hiaraka amiko foana ianao", tsy latsa-dranomaso noho ny teo aloha. Ny tantara dia mifantoka amin'ny taona voalohany niainan'ny biby, izay alika kely fotsiny, ary ny finamanany amin'ny zaza.
Ny horonantsary faharoa momba ny alika mena malaza indrindra any Aostralia dia notarihin'ity tale ity ihany koa. Ny toeran'ilay zaza dia lalaovin'ilay tovolahy Levi miller, raha kelpie sarobidy antsoina hoe Phoenix mitana ny andraikitry ny Alika Mena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Alika Mena, alika angano an-tanàn-dehibe
Gra dia hoy izy:
Androany ALAHADY 06/07/2014 TAMIN'NY NETFLIX NITONDRANTSIKA NY MPANOMPO AN'NY MAZA mena miaraka amin'ny vadiko… Tianay izany ary tena faly aho …… ..
Valiny amin'ny GRA
Jesosy ny fahatelo dia hoy izy:
Soa ihany aho fa manana namana sy mpiara-miasa amin'ny Lehilahy tsara tarehy antsoina hoe TIPP ary tsy isalasalana fa izy no namana mendrika indrindra!
Valio Jesosy fahatelo
tsar dia hoy izy:
Sarimihetsika tsara tarehy vita tsara ary misy atiny tsara. Tianay izany.
Mamaly an'i czar
Androany 07 Nov 2015 Nahita ny sarimihetsika aho ary nahavariana ahy izany .. Fifanarahana tsara tarehy loatra
Androany 7 Novambra aho dia nahita ny sarimihetsika ary tsy isalasalana fa tsara tarehy tiako ny tantara tsara be
Androany 27/11/2015 dia nahita ny sarimihetsika alika mena izahay, niaraka tamin'ny reniko sy ny raiko ary ny tena marina dia tena tianay izany, tsara tarehy tokoa afaka afaka mankafy azy mianakavy, mampihetsi-po tokoa, TIA ANTSIKA!
Avy any Neuquen renivohitra aho.
Nixalis dia hoy izy:
Salama, anio 10/01/2016. Vao nahita ilay sarimihetsika aho dia mbola feno rano ny masoko. Tantara mahafinaritra sy mampihetsi-po, ho hitako im-arivo izy io.
Valiny tamin'i Nixalis
Androany Alahady 10/01/15, vao nahita ilay sarimihetsika Red Dog mahafinaritra niaraka tamin'ny Zanako sy vadiko aho. Tantara mampihetsi-po izay asongadin'ny fitiavana alika amintsika.
Izy ireo dia tokana sy manokana. Andriamanitra hitahiry anao anio ary mandrakariva.
Hahahahaha, vao avy nijery ilay sarimihetsika ary tiako ilay izy. Tena tsara.
ferdinand alcayde dia hoy izy:
Vao nahita an'ity sarimihetsika ity ho an'ny volamena izy, feno soatoavina toy ny fisakaizana sy ny tsy fivadihana, feno fihetsem-po sy fahatsapana fihetseham-po, fialamboly ireo alikantsika ...
Valiny tamin'i Fernando alcayde
Androany 29 Janoary
Vao nahita ilay horonantsary tiako be aho ary nitondra ranomaso kely tamiko noho ny fihetsem-po mampihetsi-po dia manana alika roa aho ary tiako izy ireo
Valiny amin'ny BIBI
amymorrissey dia hoy izy:
Vao nahita ny horonantsary aho androany 06 febroary 2016 hitako tao amin'ny fantsona CDMX faha-5 TSY MIJANAKA MITSANGATRA MELOKA Mahafinaritra !! ANJARA REDA VOAVAO !!!
Mamaly an'i amymorrissey
Francisco Aguirre dia hoy izy:
Androany 7 Febroary, izaho sy ny dadako dia nahita ny tantaran'ny alika mena.
Mihetsiketsika izy ary tena tsara tarehy izay mampitomany anao araka ny tianay
Valiny tamin'i Francisco Aguirre
Franco matthew dia hoy izy:
Androany 27 Febroary dia nifarana tamin'ny fijeriko ny Red Dog, sarimihetsika mahafinaritra izay manasongadina ny fitiavana sy ny fikarakaran'ireo mpiara-mitory aminay, ny alika MILAZA tsia amin'ny fanararaotana ANIMAL!
Valio i Franco mateo
fabian mckinney dia hoy izy:
Androany 27/2/16 Nahita ny sarimihetsika aho ary toa tena tsara
Mamaly an'i Fabian mckinney
Misy ny biby ka manome ny ainy, mamoha fihetseham-po tsara maro6
Jonathan Haro dia hoy izy:
androany 27-02-2016 Nahita ny sarimihetsika tamin'ny volamena minitra vitsy lasa izay aho ary tiako izany, hiverina eto amin'ity tranonkala ity aho rehefa mahita tena namana toy ny alika mena.
Valiny tamin'i Jonathan Haro
Ohatra tsara amin'ny finamanana sy ny tanjaky ny fanoloran-tena.
Jamila dia hoy izy:
Ny tantaran'ity alika sarobidy ity sy ny toetoetran'ireny olona tsy manan-tsiny ireny izay tokony hanome lanja sy hanaja ny zavaboary rehetra eto an-tany dia tena tsara tarehy.
Mamaly an'i Jamila
samuel mogollon dia hoy izy:
Vao nahita ilay horonantsary aho. Mampianatra antsika ny lanjan'ny fisakaizana eo amin'ny alika sy ny olombelona izany. Tsy maintsy mamorona fahatsiarovan-tena hikarakara sy hanaja ny biby aho. Soa ihany aho fa manana alika kely 3 ary tena mendri-kaja izy ireo… Alika mena Bravo avy any Vzla !! !
Mamaly an'i samuel mogollon
orient amundarain dia hoy izy:
tokony hahazo loka
Mamaly an'i orien amundarain
zanak'ondry glady dia hoy izy:
Nahita azy indroa aho ary tsy haiko ny tsy hitomany tsara loatra sy mihetsika loatra
Mamaly an'i gladys becerra
Faby dia hoy izy:
Androany 29 jolay 2016 dia nahita alika mena fotsiny aho… tiako io… tsy zakako ny nitomany?
Valiny tamin'i Faby
Ahoana ny fahitako ilay sarimihetsika ary tena tsara izany, ahoana raha misy olona afaka mamaly ahy raha misy ny tena sary amin'ny sarimihetsika na ny horonantsarin'ny alika eo amin'ny fiainana dia toa tena nisy izany tamin'ny fotoana sasany.
Salama, ny tantaran'ilay alika, mety ho ampahany kely izy io, ankehitriny, ireo mpanao sarimihetsika dia mamorona be loatra ka lasa matavy tanteraka. Ilay alika faran'izay alika sy ny namany badass rehetra avy amin'ny Village People. Tsy hita ny choreography YMCA ary tonga lafatra izy io. Na izany na tsy izany, biby fiompy tsara ny alika, saingy… ilaina….
Voahosotra satro-boninahitra i Meli dia hoy izy:
Ity no sarimihetsika tsara indrindra efa hitako in-droa ary ny fahamarinana tsy miteraka ahy
Mamaly an'i Meli coronado
Leticia Jimenez dia hoy izy:
Nahita ilay sarimihetsika aho indray mandeha fa tiako ho hitan'ny zanako vavy izany ary tsy hitako feno, manana anarana hafa ve izy io? sa misy mahalala ny fomba ahazoana azy io na amin'ny fantsona iza no alefany matetika?
Valiny tamin'i Leticia Jimenez
Marco Antonio Silver dia hoy izy:
Vao nahita ny sarimihetsika 14/6/17 aho, sarimihetsika mahafinaritra, tiako ny alika ary ity karazana sarimihetsika ity dia mahatonga anay handinika indray ny fitsaboana sy ny fitiavan'ny alika, na inona na inona karazany, eo anilantsika foana izy ireo na firy na firy na firy no itondrantsika azy ireo ratsy izy ireo dia ho eo foana "ny sakaizan'ny olona no alika"
Valiny tamin'i Marco Antonio Plata
miel dia hoy izy:
Sarimihetsika mahafinaritra tiako mandra-pitomaniako
Mitaiza alika sy bitika aho ary fantatro fa ny fitiavany dia tsy misy fepetra sy tsy manam-paharoa
Mihoatra ny biby fiompy izy ireo dia ao amin'ny fianakaviako ary na iza na iza izy ireo dia miaro azy ireo na iza izy na iza
Tiako izany ary antenaiko fa ho tianao koa izany
Mamaly an'i Honey
GYK10 dia hoy izy:
Sarimihetsika tsara sy tantara tsara ho an'ny vdd iray amin'ireo horonantsary tiako indrindra toa an'i Hachikō, manome sary tena izy momba ny biby sy biby hafa izy ireo, biby manana fahatsapana tsy hay lazaina ...
Valiny amin'ny GYK10
daniel hdez dia hoy izy:
28 Desambra 2019 mijery ny sarimihetsika ...
Valiny tamin'i Daniel hdez
Dihy Afro Peroviana
Fanomezana mahazatra vitsivitsy avy any Wina